Dimy lahy sy vehivavy iray no atidoha: tratra ireo mpampanofa basy amin’ny jiolahy | NewsMada
Dimy lahy sy vehivavy iray no atidoha: tratra ireo mpampanofa basy amin’ny jiolahy
Basy Kalachnikov iray, nentina tao anaty sakaosy, no sarona voalohany. Taorian’ny fisavana, hita koa ny basy poleta (PA) anankiroa miaraka amin’ny bala sy fahana (chargeurs) dimy feno balana Kalach…Saika hampanofaina amin’ny jiolahy ireto fitaovam-piadiana ireto izao sarona izao.
Na nihevitra ny hangina tsy hamoaka ny vaovao momba ny fahatrarana fitaovam-padiana tany Analankinina Hopitalibe Toamasina, ny alatsinany teo, aza ny kaomiseran’ny boriborintany voalohany Tanambao Faharoa, nampiantso ny mpanao gazety ihany, ny alarobia maraina teo tamin’ny 9 ora sy 30 minitra, nilazany ny vaovao taorian’ny famotorana sy ny fanadihadian’izy ireo. Nambaran’ny kaomisera Rakotovao Christian fa iray ny Kalachnikov sarona ny alatsinainy izay nentina tao anaty sakaosy. Taorian’ izay, niroso tamin’ny fisavana ny tokantranon’ ireo voasambotra voalohany ny polisy, ary nahita ihany koa basy PA miisa roa miaraka amina bala ary “boite à chargeur” ana Kalachnikov miisa dimy, feno bala avokoa ary big boss iray.
Miisa dimy mirahalahy kosa ny mpiray tsikombakomba amin’ny fampanofana basy hanaovana fanafihana.
Fantatra tamin’ny fanadihadiana nataon’ny polisy ireo voasambotra fa tsy hivarotra izy ireo fa hampanofa amin’ny jiolahy hanao fanafihana ka izao tratran’ny vela-pandriky ny mpitandro filaminana izao. Tsy jiolahy ilay nilaza fa hanofa basy fa polisy.
Fantatra tamin’ny famotorana nataon’ny polisy hatrany fa misy vehivavy mandray anjara amin’ny fampanofana fitaovam-piadiana any Toamasina.
Mbola nahatrarana “boite à chargeur » feno bala iray ny vehivavy iray, ary ny faharoa kosa, nihazona ny poleta iray. “Rehefa misy hanofa basy ka sarotsarotra ny fitondrana azy, ireo
vehivavy no mitondra izany anaty poketra raha poleta ary anaty sakaosy raha Kalacknikov”, hoy ny fanazavana.
Tsy mety mivoaka ny marina
Tsy voalaza tamin’ity fihaonana tamin’ny mpanao gazety ity kosa ny tena marina momba ireo basy ireo, ny fiaviany, avy aiza ny nahazoan’izy fito miandahy ireo basy mahery vaika?
Niandry fanazavana avy amin’ny polisim-pirenena momba ny fahatrarana fitaovam-piadiana mahery vaika tahaka izao ny rehetra. Efa fandre ny hoe: “tsy ho ela dia hivoaka ny marina momba ireo toby sy mpitandro filaminana tompon’ny basy”. Efa fiteny nivoaka hatramin’ny janoary 2016 nandritra ny nahavotsotra an’ i Arnaud, nalaina an-keriny ny novambra 2015, izany. Tamin’ny vanim-potoana nahasamborana ireo mpaka an-keriny izay nahitana fitaovam-piadiana mahery vaika, hentitra ny mpitandro filaminana any Toamasina fa tsy maintsy hivoaka ny marina momba ireto fitaovam-piadiana ireto ary hanaovana fanambarana amin’ny mpanao gazety. Roa taona aty aoriana, tsy mety mivoaka ny marina. Miandry ny rehetra.